लिम्पियाधुरादेखि सुस्तासम्मको नक्सा सार्वजनिक! - Parichay Network
लिम्पियाधुरादेखि सुस्तासम्मको नक्सा सार्वजनिक!
परिचय नेटवर्क द्वारा	 २९ पुष २०७६, मंगलवार २०:३९ मा प्रकाशित
काठमाडौं । कालापानी र लिम्पियाधुरासमेत समावेश गरी नेपालको नक्शा सार्वजनिक गरेको सीमा बचाऔँ अभियानले सुस्तासहितको नेपालको नक्शा सार्वजनिक गरेको छ । आज पत्रकार सम्मेलन गरी नेपालको सम्पूर्ण भूभाग समावेश गरी नक्शा सार्वजनिकगर्दै अभियानले सरकारसँग आधिकारिक नक्शा सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।
अभियानले नयाँ नक्शा लाई देश व्यापी बनाउने जानकारी दिएको छ । तत्काल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर नक्शा हस्तान्तरण गरी कुटनीतिक पहलबाट समस्या समाधान गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरिएको जानकारी दिइयो ।
सार्वजनिकगरिएको नक्शालाई विश्वविद्यालय र विद्यालयका विद्यार्थीहरुमाझ वितरण गरिने अभियानले जनाएको छ ।
अभियानका संयोजक भैरव रिसालले सरकारसँग नक्शा जारी गर्न माग गरे । ‘कि तहामीले तयार पारेको नक्शा बेठिक भन्नुप¥यो कि सार्वजनिकगर्नुप¥यो,’ रिसालले भने, ‘देशको अतिक्रमित भूभाग समावेश गरी राज्यले तत्काल नक्शा सार्वजनिक गरोस् ।’
वर्तमान सरकारले आफ्नै देशको भूभाग समेटेर नक्शा सार्वजनिक गर्न अलमल गरिरहेको भन्दै आलोचना गरे । उनले प्रश्न गरे, ‘देशको नक्शा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई केले रोक्यो ?’ सरकारले नक्शा सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरेमा देशव्यापी अभियान चलाउने चेतावनी दिए । सरकारलाई जनस्तरबाट व्यापक दबाब सृजना गर्न आग्रह समेत गरे । यस विषयलाई लिएर गाँउगाँउमा कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएको जानकारी दिए ।
पूर्व सचिव द्धारिका डुंगेलले सरकासँग तत्काल अतिक्रमित भूभाग समावेश गरी नक्शा सार्वजनिक गर्न माग गरे । नापीविभाग सार्वजनिकगर्न स्वीकारे पनि भूमि सुधार मन्त्रालयले नमानेको कारण अहिलेसम्म नक्सा सार्वजनिक नभएको बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको कुराकानीले वैज्ञानिक आधारबाट सीमाको समस्या समाधान गरी निष्कर्षमा पु¥याउने भनिएकोमा त्यसबारे अझै कुनै ठोस पहल किन भइरहेको छैन ?’